Madaxweynaha oo ka sheekeeyay halka loo soo maray xornimada Soomaaliya. – idalenews.com
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud caawa Khudbadda ka jeediyey Munaasabadda 15-ka Maajo Maalinta Dhallinyada Soomaaliyeed oo lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Ugu dambeynti, Madaxweynaha Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa baaq u diray dhalinyaradda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Waxa aan rabaa in aan fursaddan uga faa’ideysto in aan wax yar ka dhaho taladii ay soo jeediyeen dhawaan xubno ka mid ah Golaha Shacabka. Waan akhriyey dhammaan qodobada ay ku xuseen ra’yigooda. Waxa ayna qadobadu ahaayeen kuwa kusaabsan howlaha xukuumadda. Kuwaas oo wax-ka-qabashadooda horumar weyn laga sameeyey, qaarkalena weli lagu howl jiro.
Waxaa lama huraan ah in hayadaha dowladda oo dhan ay iska kaashadaan horumarinta wadanka. Baarlamaankana muhiimad gaar ah ayuu u leeyahay hor uu socodka wadanka, waxaanna kula dardaarmeynaa inuu dowr libaax ah ka qaato sidii dalka iyo umadda soomaaliyeed looga saari lahaa marxaldan adag ee ay ku sugan yihiin.